Zwift | June 2022
Tena > Zwift
Pikantsary Zwift - ny fomba fanamboarana
Ahoana no fomba fakana pikantsary amin'ny Zwift? Raha haka pikantsary avy amin'ny fampiharana Zwift Mobile Link, kitiho ny bokotra 'Snapshot' eo amin'ny faran'ny efijery bokotra hakana sary. Miankina amin'ny fahazoan-dàlan'ny fangatahana moble anao, ireto pikantsary ireto dia hipetraka ao amin'ny sarinao 'Gallery' (amin'ny Android) na ny Camera Roll (amin'ny iOS).
Zwift hazakazaka - vahaolana maharitra
Inona avy ireo sokajy hazakazaka Zwift? Zwift SokajyA: 4+ W / kg.B: 3.9-3.2 W / kg.C: 3.1-2.5 W / kg.D: 2.4-1 W / kg.E: Misokatra W / kg.16. 2020.
Fialana zwift - vahaolana ho
Misy ve ny Zwift ho an'ny familiana? Raha manomboka milomano ianao dia ho hitanao ny wattageo amin'ny fitaovana iOS. Ao amin'ny fitaovanao Zwift, mifandraisa amin'ny fitaovana iOS PainSled / RowsBiker iOS ho metatrao herinaratra. Azonao atao koa ny mampifangaro sensor hafa amin'ny fitaovanao Zwift (toy ny monitor HR). Mahazoa Zwifting! 30. 2021.
mivoaka ary miverina indray zwift
Mivoaka sy miverina indray zwift - vahaolana azo ampiharina
Mandra-pahoviana no hivoaka ary hiverina amin'ny Zwift indray? 26,4 kilaometatra
valin'ny hazakazaka zwift
Vokatry ny hazakazaka Zwift - vahaolana miorina amin'ny hetsika
Mampiseho valin'ny hazakazaka ve i Zwift? A: Fanontaniana lehibe! ZwiftPower dia mandray angon-drakitra fampisehoana avy amin'ny Zwift ary manasokajy ny valin'ny hazakazaka amin'ny hetsika iray.
Alpe du zwift - ahoana no fomba hipetrahana
Rehefa Alpe du Zwift? Sabotsy 21.11.2020, tamin'ny 7 maraina 23.11.2020
dingana metatra zwift
Stage herinaratra zwift - valiny tsotra amin'ny fanontaniana
Moa ve mifanaraka amin'ny Zwift ny metatra herinaratra? Ny endri-javatra mampifandray an'i Zwift dia ahafahany mifehy ny maody ERG miaraka amin'ireo angona avy amin'ny metatra herinaratrao. Ny hany mila ataonao dia ny mampifandray ny metatra herinao sy ny mpampiofana mahay mifehy izay mifanaraka amin'ny Zwift.
zwift zotra vaovao york
Zwift zotra vaovao york - vahaolana azo tanterahina
Inona avy ireo làlana azonao aleha amin'ny Zwift? Nosy Zwift sy làlan'ny bisikiletaMakuri Island.Romanina.Paris.Watopia.Richmond.
zwift circuit jungle
Jungle circuit zwift - vahaolana maharitra
Mandra-pahoviana ny fizaran-tany ala any Zwift? 500m
fampiharana mpiara-miasa zwift
Rindrambaiko mpiara-miasa Zwift - fanontaniana mahazatra
Moa ve efa maty ny Zwift Companion App? Ny Zwift Companion App no ​​mpiara-miasa tonga lafatra amin'i Zwift. Ampifanaraho amin'ny solosainao amin'ny tambajotra Wifi iray ihany ary ampiasao ho mpanara-maso lalao Zwift rehefa mitaingina anao. SCREEN TRANO. Raha atao indray mipi-maso dia jereo ireo hetsika vao haingana ao anaty fahana, antsipirian'ny drafitry ny fiofanana, hetsika ho avy ary fandrosoana amin'ny tanjonao.
fametrahana zwift farany
Famaranana zwift farany - vahaolana maharitra
Inona no fomba mora indrindra hampiasana Zwift? Ny safidy mora indrindra amin'ny mitaingina Zwift dia mampiasa mpampiofana turbo mahazatra ampiarahina amin'ny sensor sy hafainganam-pandeha izay mifandray amin'i Zwift amin'ny alàlan'ny ANT + na Bluetooth. Rehefa mampiasa mpampiofana turbo mahazatra izay tsy mandefa data miaraka amina sensor sy hafainganam-pandeha, ny ezaka ataonao ao anaty lalao dia vokarin'ny watts virtoaly antsoina hoe zPower.
zwift ny fomba fanovana Jersey
Zwift ny fomba fanovana Jersey - valiny tsotra amin'ny fanontaniana
Ahoana no fomba hahazoanao akanjo lava Zwift? Amin'izao fotoana izao, ny fomba tokana ahazoana kit manokana amin'ny lalao dia ny fandresen-dahatra ny ZwiftHQ hanokana ny fotoanan'ny mpanakanto hanatanterahana izany. Araka ny voalazan'i Wes Salmon tao amin'ny Zwiftcast tamin'ity herinandro ity, ny famoronana ny sangan'asa kit dia dingana maharitra.
zwift lalana mankamin'ny rava
Zwift lalana mankamin'ny rava - ahoana no fomba hipetrahana
Mandra-pahoviana ny lalana mankamin'ny faharavan'i Zwift? 2.8 kilometatra // 4.5km lava, -3% naoty antonony.1 2019.
Cycleops powersync zwift - valiny amin'ireo olana
Afaka mampiasa mpampiofana miaraka amin'ny Zwift ve ianao? Inona avy ireo fitaovana ilaiko hilalao ny Zwift? Na izany aza tsy mila mamoaka mpanazatra turbo marani-tsaina lafo vidy ianao vao afaka mampiasa Zwift. Amin'ny ambaratonga fototra indrindra dia azonao atao ny mampiasa mpampiofana turbo taloha miaraka amin'ny sensor ANT + na Bluetooth hafainganam-pandeha (na dia hiasa tsara kokoa amin'ny metatra elektrika aza ny rafitra).
Zwift inc. - ny fomba fanapahana hevitra
Orinasa inona no manana ny Zwift? Zwift Inc.
mendrika izany ve ny zwift
Mendrika ve ny zwift - ahoana no fomba hiatrehana izany
Zwift ve mendrika ny vola? Azonao atao ny misafidy turbo mora vidy ary avy eo mividy sensor izay hanome an'i Zwift ny herinao sy ny hafainganana / ny filanao ao amin'ilay rindrambaiko, saingy mahafinaritra kokoa amin'ny mpanazatra mahay ary lazaiko fa mendrika ny fandaniana fanampiny raha toa ka afaka mihatra ny teti-bolanao. hatreto.
zwift amin'ny fahitalavitra
Zwift amin'ny fahitalavitra - ahoana no fomba fiasa
Ohatrinona ny vidin'ny Zwift isam-bolana? 15 euro
mpanazatra mahay indrindra ho an'ny zwift
Mpanazatra mahay indrindra ho an'ny zwift - fanovozan-kevitra feno
Inona no mpanazatra mahay indrindra? Iray ihany no mpampiofana marani-tsaina tena lafo vidy eny an-tsena, ary izany ny Tacx Flow Smart. Ny KICKR Snap dia manana kalitaon'ny fananganana matanjaka kokoa, lalitra mavesatra mavesatra kokoa izay manome fahatsapana mitaingina zava-misy sy tsy fahitan-tory tsara kokoa, ary metrika marimarina kokoa manerana ny tabilao.06.11.2020
zwift vondrona mitaingina
Zwift vondrona mitaingina - ny fomba hahatratrarana
Ahoana no fiasan'ny fitsangatsanganana vondrona amin'ny Zwift? Misafidiana anarana ao amin'ny lisitry ny mpitaingina ary kitiho ny bokotra Miaraha. Vonona ny hanomboka ny familiana raha vantany vao miseho ny avatar anao! Zwift dia hitazona anao eo akaikin'ny mpitaingina hafa mandritra ny segondra vitsy rehefa miakatra haingana ianao. Midira amin'ny hetsika voalamina toy ny mitaingina vondrona, hazakaza, na fanazaran-tena ataon'ny vondrona, ary asao hiaraka aminy koa ny namanao. 4 2020.